Ndeipi robhoti yekutenga? Thermomix kana MyCook? Tichaongorora uye tofananidza hunhu hukuru hweshanduro mbiri dzazvino dzemarobhoti kuti akubatsire mune iyi sarudzo: Thermomix TM31 uye MyCook.
Tichatanga nematanho mana makuru uye hunhu hunogona kuona sarudzo yedu: mutengo, nzira yekupisa uye tembiricha, mugadziri uye fomu yekutenga.
Zvirinani Thermomix kana MyCook?
Sezvo isu tichiona, MyCook ingangoita € 200 yakachipa pane TMX. Pano isu tinoratidzira mitengo yepamutemo, kunyangwe hazvo zvese zvigadzirwa zvichaita zvavanopa kukwezva vamwe vatengi. Kunyangwe MyCook inogona kudzikisa mutengo wayo pane dzimwe nguva dzegore, Thermomix inogona kupa mutengi sarudzo senge yemubhadharo-yemubhadharo mari, mabhuku eresipi, mabhegi ekutakura kana magirazi maviri pamutengo weimwe.
Heating nzira uye tembiricha
thermomix: Kugara (37º - 100º)
Iyo yekubika nzira ndeimwe yemisiyano mikuru pakati pemarobhoti maviri. Panguva ino, MyCook yakwanisa kudarika Thermomix sezvo nzira yayo yekupisa iri induction, nzira yechizvino uye nekukurumidza, ine tembiricha iri pakati pe40º kusvika 120º. Nekudaro, Thermomix inopisa kuburikidza nekushora, imwe nzira yechinyakare uye inononoka uye iyo tembiricha iri pakati pe37º ne100º. Naizvozvo, isu tinogona kutaura kuti MC inopisa pamusoro pe2-4 maminetsi nekukurumidza kupfuura TMX, nguva dzose zvichienderana nehuwandu hwehuwandu hwemukati hunopisa.
Tichiongorora kuchinjika kwekushomeka tinoona kuti Thermomix inosvika 37º seyakanaka poindi, tembiricha inobatsira kwazvo yekurova varungu uye kupukuta mazai, pamwe nekugadzira madofo. Nekudaro, MyCook inosvika 120º, tembiricha yakakwana yekumhanyisa-kupisa, apo Thermomix isingakwanise kudarika 100º.
MyCook: kutenga kwakananga muzvitoro zvemidziyo.
thermomix: pamba kuburikidza nevakuru Thermomix varatidziri.
Pano tinoona imwe yemisiyano mikuru pakati pemarobhoti ese. Kuti tiwane TMX tinofanirwa kuzviita kuburikidza nevaratidziri vanouya kumba kwedu vasina kuzvipira, vachatidzidzisa muchina nenzira yakasarudzika mumaawa maviri kana matatu uye isu tichabika madhishi akati wandei pamwechete, kuwedzera pakubvunza chero mhando yekusahadzika isu tinayo nezvayo robhoti. MyCook, kune rumwe rutivi, inogona kutengwa pane chero chitoro chemidziyo, nekudaro kubvisa kudiwa kwekuti chero munhu auye kumba kwako. Pfungwa isina kunaka apa ndeyekuti isu hatizowana mukana wekuona mashandiro anoita MyCook.
thermomix: Vorwerk - Jerimani.
MyCook inogadzirwa nekambani inozivikanwa yeCatalan Taurus, ine makore makumi mashanu nemaviri ekuziva mukugadzira uye dhizaini yemidziyo midiki uye mikuru yemumba. Thermomix inogadzirwa nekambani yeGerman Vorwerk, iine makore zana nemakumi maviri ezviitiko ichigadzira zvigadzirwa zviviri: Kobold vacuum cleaners uye Thermomix marobhoti ekicheni. Pano tine mapoinzi maviri ekuyera: kana kutenga kubva kukambani yeSpanish, iyo panguva dzekutambudzika chinhu icho vanhu vanokoshesa kuitira kuti mari igare munyika medu, kana kusarudza kuisa mari muzita rakanaka rehunyanzvi hweGerman.
Ngatimboongororai zvimwe zvinonakidza maitiro uye misiyano pakati pemarobhoti maviri:
MyCook: 11.000 shanduko paminiti.
thermomix: 10.200 shanduko paminiti.
Kunyangwe pakutanga pekutarisa tichiona kuti MyCook inodarika Thermomix mukumukira, zvinoita sekunge izvi hazvimiriri chero chakaipira robhoti reGerman. Chii chichagadzirisa hunhu hwekugaya chimiro chegirazi. Girazi reMyCook rakatetepa pazasi uye rakakwira. Thermomix, yakanga iine dhizaini yakafanana mune yayo yapfuura modhi (TM21), yakaigadzirisa mukugadzirwa kweiyo yazvino modhi nekugadzira mbiya yakafara pasi nepazasi, ichiwana kukurumidza uye kwakakwana kupedzisa chikafu.
thermomix: Makore 15.
Mycook yanga iri pamusika kwemakore mashoma ichienzaniswa neThermomix, saka hatina zvinhu zvakakwana zvekuyera nguva yepakati yeMycook. Nekudaro, isu tinoziva kuti Thermomix inogona kuve ne avhareji yenguva anenge makore gumi nemashanu.
Kurera uye zviyero
MyCook: 10 makirogiramu (360 x 300 x 290 mm)
thermomix: 6 makirogiramu (300 x 285 x 285 mm)
Isu tinoona kuti Thermomix yakareruka uye diki pane MyCook, chiitiko chinofanirwa kufunga nezvemakicheni madiki.
Zvinodhura here zvakawanda kuchenesa iyo Thermomix?
MyCook: Yambiro paunenge uchigeza mashizha sezvo asiri ekunyudzwa mumvura.
thermomix: zvese zvishongedzo ndiro yekuwachira yakachengeteka uye inonyudza mumvura.
Kana zvasvika pakushambidza, Thermomix zvakajeka anokunda. Kutanga nemagadzirirwo echivharo, tinogona kutaura kuti MyCook ine zvimwe notches kufambisa kuburuka kwechikafu panguva yekukuya pakumhanya kwakanyanya kunoita kuti kuchenesa kuome zvakanyanya sezvo ichipwanya zvakanyanya kana mvura ichidonha yakananga kubva pombi. Zvakare, iwo mapanga haasi ekushambidza mbichana akachengeteka. Aya maitiro aivapo mune yakapfuura Thermomix modhi (TM21) uye akachinjika muna2004 neiyo nyowani uye yazvino modhi iri pamusika: machira anogona kushambidzwa pasina dambudziko mudishwasher uye muvharo wakatsetseka chose.
thermomix: yakasarudzika kutariswa kubva kuna vanogamuchira uye vakasununguka kuwana kune akawanda ekubikisa makosi.
NaMyCook, iyo yekutengesa-sevhisi sevhisi yakafanana nechero chii zvacho chigadzirwa. Kana ikaputsika kana iwe uchida kutsiva, ingoibata navo uye enda kunzvimbo yakakodzera. Zvisinei, Thermomix inoshanda zvakasiyana zvakasiyana. Ichokwadi chekubhadhara dzinosvika chiuru euros uye kuita kutenga kuburikidza nemuratidziri, kune mubairo wayo. Uyu muratidziri anozove wekupedzisira-kutengesa kuonana zvachose zvichienderana nezvinodiwa. Ndokunge, kana tine chero dambudziko nemuchina kana chero mibvunzo nechero nzira, tinokwanisa kumubata nekukasira uye anotipinda isu pachedu, anotoenda kumba kwedu kunogadzira risipi inotirwisa pamwechete. Uye zvakare, ivo Thermomix vamiriri vanoita emahara emahara ekubika makosi pane akasiyana akasiyana misoro yeThermomix vatengi uye kune avo vatapi vedu vanogona kutikoka.
Ngatione maitiro aya mukuenzanisa kunotevera
Mutengo 799 € 980 €
Nzira yekupisa Induction (inopisa nekukurumidza) Resistors
Revolutions paminiti 11.000 10.200
Kuchenesa Asina-dishwasher mashizha Hongu dishwasher
Tembiricha 40- 120 37- 100
Capacity 2 litita 2 litita
Nzira X X 360 300 290 mamirimita X X 300 285 285 mamirimita
Weight 10 makirogiramu 6 makirogiramu
Fomu yekutenga Muzvitoro Kuburikidza nevaratidziri vane kuratidzira kwekumba
Company Taurus (ChiSpanish) Vorwerk (Jerimani)
Ndeipi kicheni robhoti yekutenga?
Tinofanira kutanga kutaura kuti iwo chaiwo michina yakafanana, zvese mune hunhu uye nemabasa avo uye zvishongedzo, uye nekudaro, kunyangwe isu tikasarudza imwe kana imwe, isu tinenge tichiwana robhoti rakanaka iro rinotibatsira zvakanyanya mukicheni.
Iyo yazvino MyCook modhi yakafanana chaizvo neiyo TM21 modhi, yakagadzirwa makore angangoita makumi maviri apfuura, saka ine hunhu hwakanga hwatovandudzwa pane yazvino Thermomix modhi (TM20): iko kuderera kweiyo ndiro pazasi iyo inoita kuti kukuya kuome zvakanyanya, iyo saizi yakakura yemuchina, notches dziri muvharo dzinoita kuti zvive zvakaoma kusuka uye kusavapo kwe 31º tembiricha, iyo inobatsira zvikuru mukugadzira mukanyiwa uye kufashaira mazai. Chekupedzisira, kune inobata, mhando yezvinhu zvepurasitiki zvegirazi uye Thermomix accessories inoita kunge iri nani mhando kupfuura MyCook.
Nekudaro, kunyangwe hazvo iyo MyCook ine mukuda kwayo kupisa neyakaiswa uye 120º yetembiricha, Thermomix ichiri robhoti ine makore mazhinji echiitiko (uye, nekudaro, inonakidzwa nekuvimbika kukuru), kuwacha zviri nyore kwezvinhu zvacho, sevhisi yekutengesa inoita iyo ishoma 200 euros yemusiyano inobhadhara uye nekugona kukuru mukukuya nekubika nekuda kwekugadzirwa kuri nani kwegirazi iro rakafara mujinga.
Mamwe ruzivo nezve Thermomix
Kana uchida rumwe ruzivo nezve Thermomix chikafu processor, Ini ndinokurudzira kuti iwe upinde chikamu Chii chinonzi Thermomix?